Kombala ku-Photoshop: izici eziyisisekelo
Ufuna kukhompyutha muva okwenziwe kweqembu izithombe, sivamile ahlale ujabula kakhulu ukuthola imibala yawo: endaweni ethile emnyama kakhulu, kodwa endaweni ethile, kunalokho, ukuthi isithombe esikhanya kakhulu. Kungaba efiselekayo ngandlela-thile ukukulungisa. Lapha sidinga iqoqo izinqubo, ezifana kombala. Photoshop - lena Uhlelo ngawo sizobona manje zama ukulungisa umbala njengoba kudingeka.
Okokuqala, udinga ukuvula umhleli bese ulayisha isithombe ofuna. I yamathuluzi, okuyilona elidingekayo ukuze umuntu ukusebenza umbala, ingatholakala kalula ngokufaka imenyu Isithombe, futhi eminye kuya Ukulungiswa iphuzu (Image / Ukulungiswa). Okulandelayo, khetha inketho ukukhanya / umehluko (Ukukhanya / Ukugqama), wafaka isheke ebhokisini esinelebuli kuqala (Preview) futhi baqala ukuthutha polzunochki, okuyinto Kwiwindi kuyoba ezimbili kuphela. A isinciphisi ulungisa ukukhanya, kanye nezinye - ukuze kuvele umehluko. Lokhu ukulungiswa umbala Photoshop kulabo abangajwayelene kakhulu ngohlelo.
nzima Bekusele kancane nje ukuba kungase kubonakale enye indlela umbala ukulungiswa. Esikhathini esifanayo imenyu Image / Ukulungisa, ukhethe amazinga nto (Amazinga). Iwindi uzovela nge kubhagrafu ngaphansi okuyinto uzobona ngezilayidi ezintathu: omnyama, ompunga nomhlophe. Alternately kubenze, ungalungisa iziteshi ngazinye, okungukuthi, black isinciphisi ekhanyisa isithombe ezindaweni ezimnyama kakhulu, omhlophe - kancane ukukhanya dim kakhulu, futhi grey ulungise amathoni aphakathi.
Kodwa kukhona professional nakakhulu kombala ku-Photoshop. Esikhathini aziwayo kakade uzothola Curves kongakukhetha. Uma uchofoza iwindi lizovela igrafu. Isimiso esebenza ithi ayifane kulowo odlule. Ebhokisini, ngaphandle igrafu, uzobona ezintathu imifanekiso pipettes. Ngosizo lwabo sigubha emnyama kanye akhanya iphuzu izithombe, bese, ukuthatha ingalo ijika yakhe ihluzo seziqala lungisa umbala. Lokhu ukulungiswa umbala Photoshop futhi ihlinzeka Ukukhetha iziteshi: RGB, Red, Green futhi Blue. Zingasetshenziswa ukuthuthukisa othize esithombeni.
Futhi lula noma mnyama isithombe, kwenze kakhulu noma paler ngangokunokwenzeka, ne-Exposure inketho (Exposure). Yokuhamba ngezilayidi, ongayifinyelela umphumela oyifunayo. Shintsha ukugcwaliswa umbala nombala ithoni izithombe atholakala ngokusebenzisa okukhethwa kukho ezifanele Hue / Gcwalisa isikhala. Lolu khetho unamapharamitha ezintathu: saturation, imibala ukukhanya. Lokhu ukulungiswa umbala Photoshop engenziwa wonke isithombe, futhi kwezinye imibala okungatholakala akhethiwe ku uhlu olwehlayo. Ngokubeka umkhaza ku toning, ungakwazi ukupenda wonke isithombe umbala, ucacise, ngokulungisa nemingcele. Uma ubeke uphawu isheke ngeke-ke, lapho ukhetha uhlu othize, unganikeza isifinyezo umthunzi ezengeziwe.
Futhi ukulungiswa umbala ku-Photoshop, okungukuthi omnyama nomhlophe inketho (omnyama nomhlophe), ungadlulisa umbala izithombe okufushane omnyama nomhlophe, ngenhla okuyinto futhi ongasebenza kunoma iyiphi yezindlela ngenhla zokulungisa chromaticity. Kalosha shot, unganikeza umphumela sepia, kwenze ngemibala ophuzi, obomvu, osawolintshi nezinye. Ngisho noma une-portrait isithombe ungathandi ngempela njengokusebenzisa i kombala futhi ulithumele ibe kwimodi omnyama nomhlophe, ungenza i-portrait yokuqala, enhle ngisho engaqondakali.
Indlela Shisa MP3-CD, esebenzisa indinganiso uhlelo amathuluzi?
Ungavuli "Task Manager": ukuphathwa esibanzi kunazo yokutakula
Kuphi ukulanda analogue "Photoshop" mahhala, futhi yini ukukhetha?
Kungani "ku-Skype" awukwazi ukuzwa interlocutor
Boot amagciwane: ukuqaphela nesitha ubuso
Emva kokufaka i-Windows 10, umsindo esehambile futhi akukho umsindo: indlela yokuxazulula le nkinga
Lisho ukuthini igama Olga? Ake sibone!
Artificial itshe izindlu slabs - ezibekiweko lobuchwepheshe kanye ukukhiqizwa
Isakhiwo unyawo lomuntu.
Denis Rozhkov: Filmography. Amabhayisikobho engcono ka Denis Rozhkov
Njengoba ekhula pomelo? Lapho ekhula pomelo? Indlela ukhule ube pomelo ekhaya
Kuyini ukuhlanza amazinyo okuhlanzekile futhi kuyini?
Anti-cellulite massager iyithuluzi eliphumelelayo
Amadombolo Meatless: iparele ekhaya yokupheka
Indlela ukupenda imoto ngezandla zabo: amathiphu